भुइँमा सुत्ने बानी बसाल्दा सताउँदैन कुनै समस्याले - ज्ञानविज्ञान
कस्तो सुताइ स्वास्थ्यका लागि फाइदा ?
दायाँ र वायाँः तपाईं साईड फर्किएर सुत्नु हुन्छ भने ढाडमा त्यति चोट पर्दैन । वाँया फर्केर सुत्दा मुटुको जलनलाई घटाउँछ । तसर्थ यो पोजिसनमा सुत्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ।
तर, दाँया फर्केर सुत्दा भने मुटुको जलन बढाउँछ । जर्नल अफ क्लिनिकल ग्यास्ट्रोनेस्ट्रोलोजीको अध्ययन अनुसार स्वस्थ वयस्कलाई धेरै चिल्लोयुक्त खानेकुरा खान लगाई एकातिरमात्र फर्किएर सुत्न लगाइएको थियो ।
दायाँ फर्केर सुत्ने वयस्कहरुको शरिरमा एसिडको मात्रा उच्च देखिएको थियो । अमेरिकन जर्नल अफ ग्यास्टोनेट्रोलोजीको अध्ययनमा पनि यस्तै निस्कर्ष देखिएको थियो । गर्भवती महिला पनि देब्रे फर्किएर सुत्दा रगतको प्रवाह निकै राम्रो हुन्छ ।
उत्तानो परेर सुत्नु
यदि तपाईं यो पोजिसनमा सुत्नुहुन्छ भने तपाईको शरिरको तौल सन्तुलित हुन्छ । तपार्इंमा ढाड र घाँटीको खासै समस्या हँुदैन । घुँडामुनि शिरानी राख्नु भयो भने तपाईको पछाडिको भाग अझ सिधा र स्वस्थ हुन्छ । यदि तपाई घुर्नुहुन्छ भने तपाईं यो पोजिसनमा सुत्न सक्नुहुन्छ ।
घोप्टो परेर सुत्नु
घोप्टो परेर सुत्दा तपाईलाई आनन्द त मिल्ला तर यो पोजिसनले ढाड र घाँटीलाई समस्यामा पार्न सक्छ । यो पोजिसनमा सुतेर रातभरी घाँटी र टाउको फर्काएर सुत्न सक्नुहुन्छ तर घाँटी र ढाडमा भने पीडा हुन्छ । तसर्थ बेडमा सुत्न जानुभन्दा अगाडि कुन पोजिसनमा सुत्ने भनेर सोच्नुहोस्
सुताईको पोजिसनले पनि पार्टनरसँगको सम्बन्धलाई संकेत गर्छ । केही पोजिसन ९आसन र तिनिहरुको सम्बन्धमा प्रभाव
एउटाको ढाडातर्फ फर्केर अर्को सुत्ने
यो सुताई अन्तर्गत जोडी एउटै दिशतार्फ फर्किएको हुन्छ तर एकजना अर्कोको ढाडतर्फ फर्केका हुन्छन् । यो पोजिसनले जोडी गतिशिल छ भन्ने दर्शाउँछ । एक अर्कामा विश्वास र समझधारीको संकेत गर्ने यो पोजिसन सबैभन्दा उपर्युक्त मानिन्छ । त्यसो त यौनका दृष्टिले अतृप्त पार्टनर यो पोजिसनमा सुत्ने सेक्स विज्ञ ट्रेसी कोक्स बताउँछन् ।
यो सुताईमा दुबै जना पार्टनर एउटै दिशातर्फ फर्किएका हुन्छन् । एउटा पार्टनरका हात बेड र शिरानीमा हुन्छन् भने अर्काको कम्मरमाथि हल्का अँगालो मारेको अवस्थमा हुन्छ । झट्ट हेर्दा एकले अर्कोलाई लखेटेको जस्तो देखिन्छ । यस पोजिसनले पार्टनर मध्ये एकले अर्कोलाई जीवनभर दुःख दिइरहेको संकेत गर्छ ।
ढाड फर्काएर सुत्ने
यो पोजिसनमा दुई जना विपरित दिशातर्फ फर्किएर सुत्ने गर्छन् । एकले अर्काको ढाड छोएको हुन्छ । दुई ध्रुबमा फर्केर सुतेजस्तो देखिए पनि यो पोजिसनमा सुत्ने जोडी एक अर्काप्रति प्रेमभाव राख्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले सुमधुर सम्बन्ध र निकटतालाई संकेत गर्छ ।
ठाउँ छोडेर सुत्ने
दुबै जोडी एक अर्कासँग अलिक अलग्एिर जस्तो यस्तो पोजिसन पनि खासै नराम्रो नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । यो सुताइ पोजिसनले जोडीहरु एक आपसमा विश्वास र सुरक्षित भएको संकेत गर्छ । त्यसले स्वतन्त्रताको पनि संकेत गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धमा दुबै जना निकट र स्वतन्त्र महशुस गर्छन् । एक अध्ययन अनुसार २७ प्रतिशत बेलायती यो पोजिसन मन पराउँछन् ।
एक अर्काको हातपाखुरा जोडेर एकैतिर फर्केर सुतिने यो पोजिसन निकै दुर्लभ मानिन्छ । यस अन्तर्गत जोडिले आफ्ना घुडा, औला, बुढीऔंला, जिव्रो र अन्य अंग एक आपसमा जोड्न खोजेजस्तो देखिन्छ । बिबाहको केही सातापछि प्राय जोडी यो पोजिसनमा सुत्छन् ।
जोडिमध्ये एक जना उत्तानो परेर सुत्नु र अर्को भने उत्तानो पर्ने व्यक्तिको छातीमा टाँसिनु यो सुताईको विशेषता हो । उत्तानो पर्नेले आफ्नो छातीमा सुत्नेको कपाल छुन्छ भने महिलाले पुरुषको छातीमा औला राखेकी हुिन्छन् । प्राय नवदम्पत्ति यसरी सुत्छन् । यसले प्रेम र बासना दर्शाउँछ । एकअर्काको सामिप्यतामा दुई जना सुरक्षित र खुसी हुन्छन् ।
विपरित शिरानीमा सुत्नु
यो सुताई निकै खतरानक अवस्थाको लक्षण हो । दुबैजना एकअर्कालाई पैताला फर्काएर उल्टो सुत्ने गर्छन् । निकै दुर्लभ मानिने यो पोजिसनले जोडिको सम्बन्ध सुमधुर छैन भन्ने संकेत गर्छ । यो पोजिसनमा सुत्ने प्राय सबैको सम्बन्ध बिच्छेद हुनेगर्छ । यसबाहेक जोडीबीच बैमनेश्यता, बादबिबाद र यौन असन्तुष्टि तथा अविश्वासको संकेत गर्छ ।
गलत सुताइ र त्यसले निम्त्याउने समस्या
स्वस्थ शरीरका लागि निद्रा आवश्यक छ । निद्रा जति गहिरो भयो त्यति नै धेरै स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ । स्वस्थ शरीरका लागि गहिरो निद्रा मात्र पर्याप्त छैन, त्यसमा सुत्ने पोजिसनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । गलत तरिकाको सुताइले विभिन्न समस्या हुने गर्छन् ।
प्रायः सबै मानिस रातीको समयमा एउटै पोजिसनमा सुत्ने गर्छन् । एउटै पोजिसनमा सुत्दा त्यसले स्वास्थ्यमा के असर पर्छ भन्ने कुरा धेरैले महसुस गरेका हुँदैनन् । जब कि कैयौं शारीरिक समस्या गलत सुताइकै कारण निम्तने गर्छ ।
विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने करिब ९५ प्रतिशत मानिस एउटै पोजिसनमा सुत्ने गर्छन् । सुताइमा गरिने थोरै फेरबदलले मात्र पनि छातीको जलन, अल्जाइमर तथा पार्किन्सन्सजस्ता रोगबाट जोगिन सकिने कुरा बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले जनाएको छ ।
छाती पोल्ने समस्या
गलत तरिकाको सुताइले छातीमा जलन तथा एसिडीटीको समस्या पैदा हुनसक्छ । विशेषगरी, सुत्नुभन्दा करिब २–३ घण्टा अघि चिल्लो, पीरो खानेकुराको सेवन तथा खाए लगत्तै सुत्नाले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।
यसबाट बच्नका लागि खाए लगत्तै दायाँतर्फ फर्केर सुत्नुपर्छ । पाचन प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि सिरानीमा अग्लो तकिया राख्नुपर्छ । दाहिनेतर्फ कोल्टे परेर सुत्ने, दुवै हातलाई आरामदायी मुद्रामा राख्ने र दुवै घुँडालाई हल्का मोडेर पनि छाती पोल्ने समस्यामा आराम पाउन सकिन्छ ।
आधुनिक जीवनशैलीका कारण झण्डै ४० प्रतिशत व्यक्ति ढाड सम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित छन् । गलत तरिकाको सुताइले पनि यो समस्या बढ्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता समस्याबाट राहत पाउन ढाडको हड्डीलाई सीधा राख्न जरुरी छ । घुँडालाई हल्का मोडेर त्यसको बीचमा तकिया राखेर पनि ढाड दुख्ने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
सुत्ने तरिकालाई ठीक पारेर पनि रुघाखोकी तथा साइनसबाट राहत पाउन सकिन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । हो, सही तरिकाले सुतेर पनि यस्ता समस्या कम गर्न सकिन्छ । रुघाखोकी वा साइनसको समस्या घोप्टो परेर सुत्दा (पेटतिर फर्केर) झनैबढ्न सक्छ । उत्तानो परेर (ढाडलाई तल पारेर सुत्ने) सुत्दा भने यो समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ । यसका लागि टाउको मुनि दुई वा तीनवटा तकिया राख्न सकिन्छ, ता कि टाउको शरीरभन्दा माथि रहोस् । यसले रुघाखोकीका कारणहुने समस्या कम हुन्छ ।
हरेक पटक एउटै पोजिसनमा सुत्ने बानीले काँध दुख्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । एकैतिर फर्केर सुत्दा काँध दुख्ने समस्या भएमा अर्कोतर्फ फर्केर सुत्नुपर्छ । त्यसबाहेक, दुईटा घुँडाको बीचमा तकिया राखेर तथा उत्तानो परेर सुते पनि यो समस्यामा राहत पाउन सकिन्छ ।
महिनावारी हुँदा महिलाहरूलाई कम्मर तथा ढाडमा असह्य पीडा हुने गर्दछ । गलत तरिकाले सुतेको खण्डमा पनि यो समस्या बढ्न सक्छ । यसबाट बच्न ढाडलाई तल पारेर सुत्नुपर्छ । घुँडामुनि तकिया राख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा ढाडको हड्डी सीधा हुनु जरुरी छ ।
युवाहरूमा कम्मर दुख्नु सामान्य समस्या हो । लामो समय एउटै पोजिसनमा सुत्ने बानी, दिनभर एउटै पोजिसनमा लामो समय बस्ने बानी तथा लामो समयसम्म पैदल हिँड्ने बानीले पनि यो समस्या बढ्ने गर्छ । उत्तानो सुतेर तथा सुत्दा दुईटा खुट्टाको बीचमा तकिया राखेर सुत्नाले पनि यो समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
दाँत किट्ने समस्या
एक अध्ययनले जनाए अनुसार विश्वका झन्डै आठ प्रतिशत मानिस निदाएका बेलादाँत किट्ने गर्छन् । तनाव, चिन्ता , स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्याका कारण पनि धेरैले दाँत किट्ने गर्छन् । सुत्दा दात किट्नु, दाँत र गिजा दुवैको लागि हानिकारक छ । यसले स्वास्थ्यमा मात्र नभई अनुहारको बनावटमा समेत असर पार्छ ।
अनुहारमा असर नपुगोस् भन्नका लागि पनि सही तरिकाले सुत्न जरुरी छ । ढाडलाई तल फर्काएर सुतेमा तल्लो गिजा आफ्नो स्वाभाविक ठाउँमा बस्ने गर्छ र अनुहारको मांसपेशीलाई आराम हुने गर्छ । ढाडलाई तल फर्काएर सुत्दा ओठ बन्द गर्ने, दाँतको बीचमा ग्याप राख्ने तथा टाउको र हातलाई सीधा राखेर सुत्नु पर्छ ।
गर्धन अररिने समस्या
गलत तरिकाको सुतेमा गदन दुख्ने तथा अररिने गर्छ । यस्तो समस्या भएमा उत्तानो परेर वा ढाडलाई तल पारेर सुत्नु पर्छ । साथै गर्धनलाई सीधा राख्नुपर्छ ।
अधिकांश मानिसहरू सुत्दा घुर्ने गर्छन् । गलत तरिकाले सुतेका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । सुत्ने तरिकामा गरिने थोरै फेरबदलले पनि घुर्ने समस्या निकै हदसम्म कम हुनसक्छ । घुर्ने समस्या कम गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको पेट थिचेर सुत्नु हो ।
Don't Miss it याे चक्लेटले डिप्रेसनकाे जाेखिम घटाउन सहयाेग गर्दछ, जान्नुहाेस्
Up Next आँखा सुन्दर बनाउने मस्काराले कतै हाम्राे स्वास्थ्यमा हानी त गरिरहेको छैन् ? जान्नुहाेस्
के तपाइलाइ खाेकीले सताएकाे छ ? यस्ता छन् खोकीको औषधिहरू, जान्रुहाेस्
मौसम बदलिएसँगै मानिसहरुलाई धेरै प्रकारको संक्रमण हुने गर्छ । संक्रमणका कारण अधिकांश मानिसमा घाँटी सुख्खा हुने, चिलाउने, खसखस हुने, जस्ता…